– विधेयक हुबहु पारित हुनुपर्छ : सत्तापक्ष – सम्झौता पालना नभए संसद् अवरोध : प्रतिपक्ष
काठमाडौँ — राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन माग गर्दै डा. गोविन्द केसी आमरण अनशन बसिरहे पनि प्रतिनिधिसभाले सोमबार उक्त विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहितको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५’ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस हुने र त्यसपछि उक्त विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची संसद् सचिवालयले बनाएको हो ।कार्यसूचीअनुसार विधेयक पारित गर्ने रणनीति सत्तापक्षको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसद् बैठक अवरोध गर्ने तयारीमा छ ।
यस पटक केसीले द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डित गर्नुपर्ने र निर्मला पन्त हत्याको विषय जोडेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीकै स्वास्थ्यबारे समेत टिप्पणी गरेका छन् । त्यसलाई नेकपाले केसी विशुद्ध चिकित्सा शिक्षा सुधारभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा परिचालित भइरहेको रूपमा बुझेको छ ।
सहमति र विमतिकेसी र सत्तापक्षबीच केही विषयमा विमति देखिएको छ । यसलाई केसी पक्षले सहमति उल्लंघनका रूपमा व्याख्या गरेको छ । केसीसँगको सम्झौताअनुसार एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन ।
यही अवस्थामा केसी र सत्तापक्षबीचको दूरी बढेको छ । केसीको अनशन लम्बिँदै जाँदा सहमतिको कुनै अवस्था छ कि छैन ? ‘संसदीय समितिको निर्णयलाई व्यक्तिले उल्टाउन सक्दैन, जस्ताको तस्तै विधेयक पारित गर्नेमा हाम्रो अडान हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘बरु पछि कुनै विषयमा आवश्यक परे संशोधनको विधि अपनाउन सकिन्छ । तर संसदको अधिकार कुण्ठित हुन सक्दैन ।’